Fantaro i Mingma sy i Pasang, hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline Twitter account for August 20 – 26 · Global Voices teny Malagasy
Fantaro i Mingma sy i Pasang, hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline Twitter account for August 20 – 26
Voadika ny 21 Aogositra 2019 5:57 GMT
Sary natolotr'i (ankavia) Mingma sy (ankavanana) Pasang
Isa-kerinandro dia hamaly fanontaniana maromaro momba azy ny mpampiantrano tsirairay ary hanome fomba fijery fohy momba ny fiteniny. Miaraka amin'i Mingma Phuti Sherpa sy i Pasang Yangjee Sherpa ny resadresaka etoana izay anoloran-dry zareo ny zavatra horesahiny mandritra ny herinandro amin'ny maha-mpampiantrano azy ireo.
Rising Voices: Lazalazao anay ny momba anareo azafady.
Ho ekipa iray izahay hampiatrano ny @AsiaLangsOnline hanasongadinana ny ezaky fiaraha-miasan'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fitandroana ny fitenin-drazanay Sherpa. Fianakavia-mpitsabo i Mingma Phuti Sherpa, Menavazan'ny tafik'i Etazonia, ary manan-janaka roa. Profesora mpanampy amin'ny anthropolojia mpitsidika ao amin'ny Oniversite Loterana Pasifika i Pasang Yangjee Sherpa. Avy any an-tanànakelin'i Khumjung sy i Monzo ao amin'ny faritra malaza an'i an-tendrombohitra Everest ao Nepal izahay. Monina ao Avaratra Andrefan'i Pasifika, Etazonia, izahay amin'izao fotoana izao.
RV: Manao ahoana ny satan'ny fiteninareo ao amin'ny aterineto sy ivelan'izany?
Ifampitenenana any amin'ny firenena mihoatra ny 15 amin'izao fotoana izao ny fiteny Sherpa. Misy vitsivitsy ary misy hatramin'ny anarivony ny mpiteny Sherpa ao amin'ireo firenena ireo. Ny toerana telo be mpiteny Sherpa indrindra dia ao Nepal ao Kathmandu, ao India any Darjeeling, ary ao Etazonia ao New York. Azo apetraka amin'izay fotoana izay fa tsaratsara toerana ihany ny fiteny Sherpa. Saingy nahamarika ny vondrom-piarahamonina ao amin'ireo toerana ireo fa nisy fihenany be ny isan'ny tanora mpiteny Sherpa, ary be ihany koa ny fahaverezana ara-kolontsaina sy ara-pitenenana teo amin'ny taranaka mifandimby. Ireo tsikaritra ireo no nanetsika ny Sherpas, any amin'izay toerana onenany any, hiasa ho amin'ny fitandroana ny fiteniny amin'ny fandraketana ny voambolana Sherpa amin'ny fampiasana ireo media isan-karazany na amin'ny fanomanana kilasy hianarana ny fiteny. Any antokantrano ny lehibe mampianatra ireo ankizy, izay nitombo ivelan'ny tanàna niaviany any Himalaya, ny fiteny araka izay azon-dry zareo atao.
RV: Amin'ny lohahevitra manao ahoana avy no kasainareo hifantohana mandritra ny herinandro izay hitantanana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang?
Mandritra ny herinandro hitantananay ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline izahay hifantoka amin'ny fizarana ireo fepetra isan-karazany noraisin'ny vondrom-piarahamonina hahatonga ny fiteny ho velona. Atombokay amin'ny fizarana zavamisy sy tarehimarika izay hampahazava ny sata misy ny fiteny amin'izao fotoana izao izahay. Avy eo izahay hizara ireo tantara izay nanetsika anay tsirairay avy hikojakojana sy hampiroboroboana ny fiteny. Ny songadin'ny herinandronay dia ho any amin'ny hira sherpa—nentin-drazana sy ara-panandramana— izay hanabe voho ny zava-niainana sy ny fihetseham-po mipaingotra amin'ny mahaolona anay sy amin'ny fomba fahalalanay, izay tsy mety apetraka amin'ny fitaovam-pampitana tahaka ny rakibolana. Hamarana ny herinandronay izahay amin'ny eritreritra nateraky ny fahavitrihana sy ny mety hoavin'ny fiteninay.
RV: Inona no tena antony manosika anareo amin'ny fikatrohana antserasera amin'ny fiteninareo? Inona no fanantenanareo sy ny nofinofinareo ho an'ny fiteninareo?
Roa lela ireo mpanetsika anay ho amin'ny fikatrohanay nomerika ho amin'ny fiteninay: voalohany, hifandray amin'ny Sherpas monina manerana izao tontolo izao izay manana ny fombany hikajiana ny fiteny, ary faharoa, hifandray amin'ireo mpikatroky ny fiteny hafa mba hifampizara fironam-piarahamonina. Amin'ny alalan'ny fampiasana media nomerika, manantena izahay hizara ireo zava-niainana itoviana sy hanangana firaisankina mahahoatra ny toerana ara-jeografika misy anay. Ny fanantenanay sy ny nofinofinay dia hoe rehefa any amin'ny andron'ny zafikelinay any, dia tsy vitan'ny hoe velona manana ny mpampiasa azy ny fiteninay, fa hatanjaka, fiteny mikarantsana mihamitombo hatrany.